လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေသည့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ / မျိုးမင်းစိုး / ဧရာဝတီ
By ဇူးဇူး4May 2017
ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီ ၃၀ ရက် မနက်ပိုင်းက မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ စီးနင်းလိုက်ပါလာသော လိုက်ထရပ်ယာဉ်ကို ဝင်တိုက်ခဲ့သည့် ယာဉ်မောင်းကို မေလ ၂ ရက်က ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး ပုဒ်မ ၅ ခုဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူဆောင်ရွက်နေကြောင်း အမှတ် ၉ ယာဉ်ထိန်းရဲ ဒုတပ်ခွဲမှူးရုံး( မြောက်ပိုင်းခရိုင်) မှ သိရသည်
မြောက်ပိုင်းခရိုင်ယာဉ်မှု့စစ်တာဝန်ခံ ရဲအုပ်သောင်းနိုင်ထွန်းက “ ယာဉ်မောင်းနာမည် နေမင်းမောင်၊ အသက် (၁၈ နှစ်)၊ ကျောင်းသား ဥပဒေဒုတိယနှစ် စာပေးစာယူ။ သူ့ကို ၂. ၅. ၂၀၁၇၊ ၁၁ နာရီ ၅၅ မိနစ်မှာ ဖမ်းဆီးရမိတယ်။ သူ့မိဘတွေ ကိုယ်တိုင်ပဲ အပ်ပေးတဲ့သဘောပါ။ သူ့လည်း ဒဏ်ရာရသွားတော့ အခုဆေးရုံမှာ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရဲလုပ်ငန်းတွေပြီးအောင် ဆောင်ရွက်မယ်။ ဆေးရုံက ဆင်းတာနဲ့ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် တရားရုံးမှာ တရားစွဲတင်မယ်” ဟု ပြောသည်။
အမှုဖြစ်စဉ်မှာ ဧပြီလ ၃၀ ရက်၊ နံနက် ၁၁ နာရီခွဲက ၇၁ နှစ်မြောက် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့နေ့အကြို အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သွေးလှူဒါန်း၍ ပြန်လာသော မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ လိုက်ပါလာသည့် လိုက်ထရပ်ယာဉ်ကို မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ထောက်ကြံ့အပိုင်၊ နွယ်ခွေမှတ်တိုင်အနီး၌ မစ်ဆူဘီရှီအမျိုးအစား ကားတစီးက တခြားကားတစီးကို ကျော်တက်ရင်း အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ဝင်ရောက်တိုက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
အခင်းဖြစ်ပွားသည့်နေ့တွင် အမှတ် (၉) ယာဉ်ထိန်းရဲ ဒုတပ်ခွဲမှူးရုံး (မြောက်ပိုင်းခရိုင်) မှ ယာဉ်မှု့စစ်များက သွားရောက် စစ်ဆေးရာ ယာဉ်တိုက်သူသည် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြောင်း သိရသဖြင့် ထောက်ကြန့်ရဲစခန်းတွင် ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၃၃၈၊ ၃၃၇၊ ၂၇၉၊ ၂၀၂ တို့ဖြင့် အမှုဖွင့်ခဲ့ကြောင်း၊ ညနေပိုင်းတွင် ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦး သေဆုံးသွားသဖြင့် ပုဒ်မ ၃၀၂(က) ထပ်တိုးအမှုဖွင့်ခဲ့ကြောင်း မြောက်ပိုင်းခရိုင် ယာဉ်မှု့စစ် တာဝန်ခံ ရဲအုပ်သောင်းနိုင်ထွန်းက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် အခင်းဖြစ်ပွားပြီး ညနေ ၅ နာရီခန့်တွင် ဥက္ကံနယ်မြေ မီးသတ်စခန်းမှ မီးသတ်တပ်ကြပ်ကြီး ကိုကိုဦး သေဆုံးသွားပြီး ၁၂ ဦးမှာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအရ အခင်းဖြစ်သည့်နေ့က လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့နေသကဲ့သို့ ပြိုင်ကား ၅ စီးက တိုက်ခဲ့သည်ဆိုခြင်းမှာ မဟုတ်ကြောင်းနှင့် တိုက်သည့်ကားတွင်လည်း ပြိုင်ကားအင်္ဂါရပ်များ မရှိဘဲ ရိုးရိုးအိမ်စီးကားသာဖြစ်ကြောင်း၊ ယာဉ်မောင်းသည်လည်း သာမန်လူတန်းစားတဦးသာ ဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
ထိုအမှုဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အခင်းဖြစ်ပွားရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် မှော်ဘီမြို့နယ် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဦးစီးအရာရှိ ဦးဇော်မင်းဦးက “ နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့ ပြည်သူ့အကျိုးပြု ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကျနော်တို့ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ဒီလိုရမ်းကားစွာမောင်းနှင် တိုက်ပြီးတော့ တာဝန်မဲ့စွာနဲ့ တိမ်းရှောင်ထွက်ပြေးတဲ့အတွက် ကွယ်လွန်သွားတဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားရော၊ ဒဏ်ရာရတဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ကိုယ်စားရော ဌာနကိုယ်စားရော အင်မတန် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ မှန်ကန်တဲ့ ဥပဒေကြောင်း အရပဲ ဖြစ်စေချင်တယ်” ဟု ပြောသည်။
သေဆုံးသူ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် တပ်ကြပ်ကြီးကိုကိုဦး၏ ဈာပနအခမ်းအနားကို မေ ၂ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မှော်ဘီမြို့နယ် မီးသတ်စခန်းမှ တပ်ကြပ်ကြီး မျိုးမြင့်အောင်နှင့် အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် တပ်စုမှူး စိုးဝင်းတို့သည် ဒဏ်ရာအနည်းငယ် ပြင်းထန်သဖြင့် (မစိုးရိမ်ရ) မြောက်ဥက္ကလာပ ဆေးရုံတွင် အတွင်းလူနာအဖြစ် တက်ရောက်ကုသလျက် ရှိကြောင်း ဦးဇော်မင်းဦးက ပြောဆိုသည်။